“လက်ကမ်းအမွေ ... ပေးပါအမေ”
အို ... အမေ ... ။
လျှော့ နည်းပါးလည်း
တိုင်းပြည့်ဂုဏ်ရည် အို … အမေ … ။ .
လက်ကမ်း အမွေ ...
ပေးပါ အမေ ... ။ .
Posted by JACBA at 8:39 PM